Sezvo nyika yeJapan animation, inonzi Anime, yakaona kukwira kwemukurumbira pamusoro pemakore, saizvozvowo ine graphic novel shamwari - manga. Anenge zvese anime anowanzo kutanga semanga asati awana yake yega show. Kana iwe uri fan weizvi asi urikushomeka pamari kuti utore mamwe mabhuku matsva, pane akakura manga masosi pamhepo ekuverenga ako aunofarira manga digitally.
Saiti dzakanyorwa pazasi dzinoita kuti zvive nyore kuwana yakakurumbira manga kana kutsvaga yakaderera-inozivikanwa mitezo inogona kukufarira. Iyo Manga pane aya masosi anoiswa kuburikidza neepamusoro-soro scans, ichibvumira chero munhu kuwana kwavari. Iyo yakanaka nzira yekuenderera pane ako aunofarira akateedzana.
Saka, heano masere maseru akanakisa emasaiti iwe aunogona kutarisa izvozvi.
Kunyangwe ichinyanyo kuzivikanwa neayo anime kutenderera sevhisi, Crunchyroll zvakare inopa vadikani vema manga kuwana kune manga akateedzana. Kune akawanda emahara manga pane saiti, uye zvakare kune anowanikwa zviripo kuti iwe ugone kuverenga uchienda futi.
Kuti uverenge ese manga aripo, unogona kusaina kuCrunchyroll Premium ye $ 7.99 / mo. Izvi zvinokupa mukana kune zvese anime uye manga pane saiti. Iyo saiti zvakare inopa izvo zvainodaidza kuti "simulpubs," kwaunogona kuverenga manga panguva imwe chete iyo yaburitswa muJapan.
Crunchyroll yakanaka kune isina kushambadzira ruzivo kana ichinge iine akateedzana aunofarira.
Kana iwe uchitsvaga zvishoma zvishoma zvakasiyana, Manga Kakalot ane zvaunoda uye nezvimwe. Iyo inochengetera manga akateedzana anotora makumi mana emhando dzakasiyana, uye iwe unogona kuwana ese akakurumbira akateedzana pamwe nezvakawanda zvakawanda zvinozivikanwa-zvishoma.
Chitsauko chega chega chemanga chinounganidzwa pane imwe peji rewebhu, kuti iwe ugone kupururudza kuti uverenge zvakazara zvechero chitsauko. Iwe unogona zvakare kushandura akati wandei sarudzo kuti kuverenga kuve nyore, sekusarudza kuti ndeipi mufananidzo server yekushandisa (kana mumwe wavo aine chikanganiso, iwe unogona switch) uye nekuchinja iwo margins akatenderedza iwo mapeji. Saiti iyi ndeimwe yeakanakisa kuwanda kwekuverenga manga.
Kune anopfuura zana marudzi ema manga kuti utarise pane ino saiti, saka unogona kuwana chero niche nhevedzano iwe yaunogona kunge uchitsvaga. Kunyanya kana iwe uri munhu anofarira zverudo manga, Manga Owl ine muunganidzwa muhombe wekutarisa kuburikidza, kusanganisira zvakanyanya kufarirwa nhevedzano senge Naruto. Kune mamwezve akawanda akawanda-anotungamira manga pane ino saiti, saka chengeta izvo mupfungwa.
Kana iwe ukanyoresa kujoina saiti, iwe unogona kugadzira kuunganidzwa kweyaunofarira manga uye kutora chikamu munhaurirano. Iyo ine inoshingairira nharaunda uye zvakawanda zvemukati zvekuchengetedza iwe wakabatikana kuverenga.
4. Manga Kuberekwazve
Sezvo mazhinji manga anodikanwa kuturikirwa kubva kuJapan kuti asvike kune vateereri veChirungu, akawanda madiki akateedzana haatombo dudzirwa kana kuita nzira yavo yekubuda muJapan. Chinangwa chesaiti ino kuendesa aya mashoma-anozivikanwa kune vateereri vakawanda, nerubatsiro rwevashanduri vanozvipira kuti vagone kuwanikwa nevadzidzi veChirungu.
Kune akawanda emahara akateedzana pane ino saiti, kana iwe unogona kubhadhara kuti uverenge zvimwe zvakateedzana kana uchida. Ino manga saiti ibasa rakanakisa kune vese avo vanoda manga kuona kuti vashoma uye vagadziri vane mukana wavakakodzera kuti basa ravo riverengerwe.
5. Comic anofamba
Ino saiti hombe muJapan for manga, uye iwe unogona kushandura mutauro zviri nyore kuChirungu kuita kuti ruzivo rwako rwekuverenga ruve nyore. Unogona kuwana akawanda akateedzana akateedzana neazvino matsva, uye kana uchida iwe unogona kusarudza kutenga zvimwe zvezvakateedzana kune izvo zvisingawanikwe zvachose mahara.
Peji rega rega reiyo manga rinopa ruzivo rwakawanda kuti ugone kuwana zvimwe zvakafanana kana zvimwe zvikamu zvechete dzakateedzana. Zvakare, zvitsauko zvakavhenekwa zviri zvepamusoro soro uye zviri nyore kuverenga.
6. Bhuku Walker
Bhuku Walker inzvimbo yehanzvadzi kuComic Walker, kwaunogona kutenga akawanda manga. Nekudaro, ivo zvakare vanopa mazhinji emahara mazita ekuti iwe uverenge mukati e-bhuku fomu. Iwo emahara manga zvinopihwa zvinowedzeredzwa kazhinji, kuti iwe usamboziva izvo iwe zvaungawana kuti uverenge.
Bhuku Walker rinewo zvidzikisira zvakadzama pamazita mazhinji ema manga, saka kana iwe uchida kuva nawo, inzvimbo huru yekutenga manga zvakare. Ukangotora zita, iwe unogona kuriverenga mubrowser rako nemuoni akakodzera uye woona ese akarodha manga mune rako bhuku rebhuku. Saiti iyi ndeimwe yedzakanakisa nzira dzekuverenga yemahara manga uye ese manga mune zvese.
Kiss Manga ndeimwe yemanyuko epakutanga emahara edhijitari manga uye nekudaro ine matani ezvinyorwa zviripo. Iyi manga saiti yakanakisa kana paine chaiyo manga iwe yaunofunga kuverenga uye unogona kuitsvaga iyo pane saiti. Iwe unogona zvakare kuona yakakurumbira nhevedzano iyo vamwe vari kuverenga.
Yega yega manga akateedzana ane ruzivo nezve izvo papeji ravo, uye iwe unogona kuverenga chitsauko chimwe nechimwe pane peji rimwe, saka haufanire kuzorodza nguva dzese. Izvo zviyero zviri zvemhando yepamusoro, uye kune akawanda manga akateedzana akashandurwa kuChirungu izvo iwe zvausingakwanise kuwana neimwe nzira.
Readm.org inzvimbo yakashambidzika yakashambidzika, ichikuratidza yakanakisa uye inonyanya kuzivikanwa manga akateedzana pane peji rekutanga, pamwe nemhando dzakawanda dzekutarisa. Izvo zviyero zveakateedzana 'zviri zvemhando yepamusoro uye zviri nyore kuverenga.
Iwe unogona kutora chikamu munharaunda inoshingaira uye kurukurai ikozvino kufarira manga nevamwe. Tora mukana wekutsvaga kwepamberi, kunyorera machenjedzo pane zvitsva zvitsva, uye kugona kugadzira kana kutsvaga kuunganidzwa kwema manga akateedzana.
Kuverenga Manga Online
Kushayikwa kwemari hakufanirwe kukutadzisa kubva kumafaro ekuverenga manga, saka edza mamwe emahara manga masosi akanyorwa pamusoro kuti uwane zvaunofarira.
Ndeapi mamwe emamhanzi ako aunofarira? Tizivisei mune zvakataurwa pazasi.
7 Zvakanakisa Zvishandiso zvekuona Anime Yemahara
Anime Anime Strike: Mutengo Wakanyanya Kudhakwa
Nzvimbo dzepamusoro dzeProxy - Rinzvimbo dzeVashandi Vemuproxy Mafambisi Apamusoro
Heino runyorwa ruzere rwezvakaitika muMinecraft Dungeons
Iyo Yakanyanya Anime Wallpaper Sites Yeiyo Desktop
Yekupedzisira Nongedzo Kumhara Mapeji